Maraykanka oo dhowaan shaacinaya siyaasiyiinta dib u dhigaya doorashada Soomaaliya | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maraykanka oo dhowaan shaacinaya siyaasiyiinta dib u dhigaya doorashada Soomaaliya
Maraykanka oo dhowaan shaacinaya siyaasiyiinta dib u dhigaya doorashada Soomaaliya
Dowlada Maraykanka ayaa lagu wadaa in dhowaan ay soo bandhigto magacyada siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee lugta jiidaya doorashada dalka Soomaaliya.
Safiirka Dowladda Maraykanka ku fadhiya Soomaaliya Amp Donald Yamamoto ayaa tegeya magaalada Washington si dowladiisa ugu bandhigo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku lugta leh in dib loo dhigo doorashooyinka Soomaaliya.
Amp Yamamoto ayaa kulan ay yeesheen Wakiiladda Beesha Caalamka iyo Ra’iisul wasaaraha xukumadda xilgaarsiinta ah ka sheegay in looga yeeray Washington si uu warbixin uga siiyo Maraykanka dadka ku lugta leh in ay dib u dhigaan doorashada oo khatar ku ah amniga Soomaaliya.
Safiirka ayaa sidoo kale sheegay in Doowlada Mareykanka ay ka cabsi ka qabto in doorashada Dib loo dhigo.
“Mareykanka wuxuu wali wadaa howlgalada milatari ee wadajirka ah ee ku taageerayo ciidanka Xoogga dalka SNA. Talaadadii askari ayaa nooga dhintay gudaha Soomaaliya. Soomaalidu waa in ay wajahdaa AlShabaab oo aysan ku mashquulin meelo kale” ayuu Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya ka sheegay shirkii Beesha Caalamka iyo Ra’iisul wasaare Rooble.
Safiirka ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay in uu ka caawiyo Soomaaliya kormeerka doorashooyinka.
Maqaal horeWadamada ku bahoobay G7 oo ka walaacsan xaalada siyaasada Soomaaliya
Maqaal XigaMadaxweynaha Kenya Uhuru oo la kulmay Ergeyga Qatar Al Qahtani